विप्लवका एक नेता संखुवासभाबाट हतियार सहित पक्राउ::आर एम खबर
काठमाडौं – प्रहरीले संखुवासभाबाट विप्लव समूहका एक जिल्ला नेतालाई पक्राउ गरेको छ । असार १६ गते गोली चलेको स्थान नजिकै हाइला खोलाबाट निमा दोर्जी तामाङ पक्राउ परेका हुन् ।
उनीसँग एक नाल एसएलआर, म्यागजिन, एउटा एलएमजी म्यागजिन, ७।६२ एमएमको ११० वटा गोली, ३ मिटर तार र १३ राउण्ड खाली खोकासहित बरामद गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
तामाङको साथबाट मोबाइल, डायरी र विप्लव समूहको पर्चा पनि बरामद गरेको छ । अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, संखुवासभाको हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एसपी रमेश थापाले धुन खबरलाई बताए । विप्लव समूहले त्यस क्षेत्रबाट ३ जना नेता कार्यकर्ता बेपत्ता भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्: ‘विप्लव समूह जम्माजम्मी लुटेरा र आतंककारी हो’गोकुलप्रसाद बास्कोटा
काठमाडौँ– सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि गालीको वर्षा गरेका गरेका छन्।
बिहीबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सरकारले किन पहल नगरेको? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बास्कोटाले विप्लव समूहलाई बल प्रयोगबाटै ठीक पारिने बताएका हुन्।
सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि एजेण्डाविहीन भएर भागेको आरोप लगाउँदै उनले बलप्रयोग गरेर तह लगाउने बताएका हुन्। मन्त्री बास्कोटाले विप्लव समूह वार्ता आउन जति ढिलो गर्छ उति नै क्षति व्यहोर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले भने, ‘समय छ आउनुहोस छलफल गरौं। राम्रोसँग थाहा पाए हुन्छ। जति ढिलो हुन्छ त्यति क्षति व्यहोर्ने उहाँहरुले नै हो। समय छ आउनुहोस छलफल गरौं।’
विप्लव समूहप्रति निक्कै रुखो शैलीमा प्रस्तुत भएका बास्कोटाले नेकपालाई गैरराजनीतिक आतंककारी संगठन भएको दाबी गरे। पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘विप्लव समूह जम्माजम्मी लुटेर समूह हो। यो आपराधिक नै हो, आतंककारी नै हो।’
उनले जतता अधिकार सम्पन्न भइसकेकाले फेरि अधिकारकै लागि भनेर संघर्ष गर्नु औचित्यहीन भएको बताए।
‘जनताले मागे जति पाइसके। उहाँहरु जसरी जाँदै हुनुहुन्छ त्यो सर्वनासको बाटो हो। जम्मा उपभोगवादी हो, धनकमाउ वाला हो। त्यो पनि पसिना बगाएर होइन, लुटेर,’ बास्कोटाले भने।
‘संगठित आतंकवाद, सामाजिक फाँसीवादी हो। त्यो समूह कुनै दर्शन नीति सिद्धान्तमा आधारित छैन। दर्शनले आशा जगाउँछ, उहाँहरुको क्रियाकलापले हिंसा र अराजकता पैदा गरेको छ,’ उनले भने।
उनले विप्लव समूह फिलिपिन्स र कम्बोडियाका शासक जस्तै पतन हुने दाबी गरे । उनले प्रहरीको कारबाहीमा विप्लवका नेता कार्यकर्ता मारिदा भइरहेको विरोधप्रति पनि असहमति जनाए । ‘उहाँहरुले निर्देष मान्छे मारेको चाहिँ क्रान्ति हुने ? सरकारले झुक्किएर कोही मर्‍यो भने चाहिँ दमन?’ बास्कोटाले प्रश्न गरे।
‘उहाँहरुले केही समय दुःख दिन सक्नु हुन्छ। जनतालाई बाँच्न दिनुपर्‍यो नि। चुनावमा लड्ने हुति छैन, दिनमा १२ वटा सिम फेरेर कोठाबाट लुकेर फोनमार्फत धम्क्याएर हुन्छ? बन्दुकले सत्ता कब्जा गर्छु भन्ने नसोचे हुन्छ,’ उनले चेतावनी दिए।
मन्त्री बास्कोटाले सरकारले गरेका कामबारहीप्रति भइरहेको आलोचनाप्रति कटाक्ष गरे। सरकारलाई के गर्नुपर्छ भन्ने राम्रोसँग थाहा भएको दाबी उनले गरे।
बास्कोटाले भने, ‘दुई तिहाइ सिमलको भुवा होइन। यसो खस्ने कता जाने कता जाने थाहा नभएको जस्तो। जनताका लागि के गर्नुपर्छ हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। हेक्का राख्नुहोस्, सरकारले काम गरिरहेको छ, गर्छ।’